admin | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 997
>Mar Mar Aye - 348
>Cartoon Beruma - China's next &quot;bio&quot; weapon - &quot;Food&quot;
>88 - 23 year - Free T Shirt Distribution
>မိုးမခ ရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ –ိုံဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇
> မိုးမခ ရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီိုံဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇ သတင်းတိုထြာ နဲႚ သီခဵင်းပဒေသာအိုးဝေစကဿာပူအဖြဲႚက ဦးအုံးခင်နဲႚ စကားလက်ဆုံေုကးမုံဦးသောင်ိးံငြ့် သုံးသပ်ခဵက်အဆိုတော်ကိုအုံ့ကီး နဲႚ ဥိးပန်တဵာ စကားဝိုင်းဦးပန်တဵာ၊ိံငြ်ူးမတ်ခိုင် နဲႚ...
>ASEAN siding with Illegal Junta of Burma
>ူမန်မာ့အရေးကိင်္စအတကြ် စကဿာပူတငြ် လူထိုံငြ့် အစိုးရတိုႚ သဘောကြဲတရားမ၀င်သော စစ်အစိုးရကိုိုံင်ငံတကာက တရားဝင် ၀ိုင်ူးပီးကာကယ်ြနေဟုမန်မာမဵားေူပာမိုးမခ အထောက်တော် (စကဿာပူ)ိုံဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇ အာဆီယံထိပ်သီး ညီလာခံတငြ်ူမန်မာအရေးကို ထိရောက်သည့်...
> သား ၃ သားမောင်စမြ်းရည်ိုံဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇ မောင်စစ်သားတိုႛစစ်တန်းလဵားသိုႛူပန်သောခၝ။ ရင်ြရဟန်းလည်းကေဵာင်းသခဿန်းသိုႛူပန်ုကစိုႛ။ တိုႛကေဵာင်းသားလည်းသြား္ဘမဲကေဵာင်းသိုႛူပန်သြားစိုႛ။ ရေခြဵြိူးဖလြည်းက္ဘူမဲသံသာ ကောင်းကင်ူပာသိုႛကူပၝစေလောူ့ပန်စေလော့။ ဗုဒ္ဌိံတ်ြဏ္ဍမကြ် ဟောုကားခဵက် မောင်စမြ်းရည်ိုံဝင်ဘာ...
>သီးလေးသီးရဲႚ တန်ဆောင်တိုင် အူငိမ့်
> သီးလေးသီးရဲ့  တန်ဆောင်တိုင် အငြိမ့်ပွဲဇာဂနာနိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇ ပန်းသီးဆို (တြိချိုးခွန်းတောက်)။ ။လ တန်ဆောင် ခါသမယ ပေမို့ ည အရောင်သာယာစွ ရယ်လို့ လာလာသမျှ စိတ်ပျော်ရွှင်။ ဖျော်ဖြေကြောင်းရယ်...
>ဦးအုန်းကေဵာ် – အားကစား တံဆိပ်ခေၝင်းမဵား
> အားကစား တံဆိပ်ခေၝင်းမဵားဦးအုန်းကေဵာ်ိုံဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇ “တိုႛိုံင်ငံမြိာိုံင်ငံတကာ အဆင့်မီ အားကစားပြဲကို ပထမဆုံး အိမ်ရငြ်ိုံင်ငံအူဖစ် လက်ခံကဵင်းပခဲ့တာ ၁၉၆၁ မြာကြ“ “ဘာအားကစားပြဲလဲ ဦးလေး“ “အရြေႚတောင်အာရြ ကဋ္ဋန်းဆယ်ြအားကစား္ဘပိင်ြပြဲကြ။ အတိုကောက်...
>ဦးလထြနြ်း အသက် ၆၈ိံစြ် ကယ်ြလနြ်ူခင်း ၀မ်းနည်းေုကာင်း
> ဦးလှထွန်း အသက်၆၈နှစ် ကွယ်လွန်ခြင်းမိုးမခ၏ ၀မ်းနည်း မှတ်တမ်း နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇၊ အောင်ရတနာဆေးရုံတွင် လူကြီးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သည်။ လာမည့် အဂါင်္နေ့တွင် ရေဝေးတွင် အသုဘချမည်။ ဇနီးသည် ဒေါ်ခင်ရွှေ နှင့်...
>ူမန်မာစစ်အစိုးရအဖြဲႚိံငြ့် တရုတ်ူပည် အထူးကိုယ်စားလယ်ြအဖြဲႚတြေႚဆုံ
>ူမန်မာစစ်အစိုးရအဖြဲႚိံငြ့် တရုတ်ူပည် အထူးကိုယ်စားလယ်ြအဖြဲႚတြေႚဆုံမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ိုံဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇ ယမန်နေႚ သောုကာတငြ်ူပီးဆုံးသည် ၂ ရက်ုကာ လာရောက်တြေႚဆုံသြားသည့် ခရီးစဉ်ကို စင်ဟြိာံငြ့်ူမန်မာအလင်းက စနေႚနေႚတငြ် ထုတ်ူပန်သည်။...
>မောင်ရစ် – စစ်ဖိနပ်အောက်မြာူမန်မာူပည်ုကီးကို မထားခဲ့နဲႚ
> စစ်ဖိနပ်အောက်မြာူမန်မာူပည်ုကီးကို မထားခဲ့နဲႚမောင်ရစ်ိုံဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာမြာူမန်မာူပည်သူတြေ ဟစ်ေုကြးတာကူမန်မာူပည် အာဏာရင်ြလက်အောက်က လတြ်ေူမာက်ရေးပၝ။ စစ်တပ်က ကဵည်ဆံတေနြဲႚ ဟစ်ကေ့းသံတေကြို ပစ်ခဵလိုက်တော့၊ ကမ္တာုကီးကူမန်မာူပည်အတကြ်...
>ဆန်ဖရန်စင်္စကိုတက္ကသိုလ်ကူမန်မာဗုဒ္ဌဘာသာ ရဟန်းတော်မဵားကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘြဲႚ ခဵီူးမငြ့်
> ဆန်ဖရန်စင်္စကိုတက္ကသိုလ်ကူမန်မာဗုဒ္ဌဘာသာ ရဟန်းတော်မဵားကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘြဲႚ ခဵီူးမငြ့်သာသနာ့ဥသ္တွောင် ပဓာနစေရ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ုကီး ဦးကောဝိဒ တက်ရောက်လက်ခံမည်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ိုံဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇ အမေရိကန် ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဘေးဧရိယာရြိ ဆန်ဖရန်စင်္စကိုတက္ကသိုလ်က ၎င်းတိုႚ၏...
>ကဋ္ဋန်မိံငြ့် ဘ၀မဵားစြာ တယ်ြရာမဲ့ ရင်ြသန်ကဵန်ရစ်ုကသူမဵား
> ကဋ္ဋန်မိံငြ့် ဘ၀မဵားစြာ တယ်ြရာမဲ့ ရင်ြသန်ကဵန်ရစ်ုကသူမဵားသန်ူးမင့်အောင်ိုံဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇ အစမဵားေူပာင်းလဲူခင်းမဵာူးဖင့် ထာဝရတည်္ဘမဲနေသော လူမဘြ၀ လူႚအဖြဲႚအစည်ုးကားမြာ အနေုကာလာတာနဲႛအမ္တွ ကဋ္ဋန်မရဲႛေူခလမြ်းတေကြ မနြ်းဆလိုႛမရသေးတဲ့ လမ်းသစ်တေဆြီ ဦးတည်နေခဵင်စိတ်ကို မနည်းဖိသိပ်ခဵြိြးိံပ်ရင်း...
> စကဿာပူတငြ် ကဵင်းပမည့် အာဆီယံညီလာခံသိုႚူမန်မာမဵားက အဆိုတင်သငြ်းမည် မိုးမခ အထောက်တော် (စကဿာပူ)ိုံဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇ ယခိုံစြ် အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကို စင်ကာပူက တာဝန်ယူ ကဵင်းပမည်ူဖစ်သည်။ူမန်မာူပည်ိုံင်ငံရေး အုကပ်အတည်းတငြ်...
>စစ်ဖိနပ်အောက်ကူမန်မာူပည် – မပိုႚလိုက်ရတဲ့ သတင်းမဵား – ၃
> စစ်ဖိနပ်အောက်ကူမန်မာူပည် – မပိုႚလိုက်ရတဲ့ သတင်းမဵား – ၃မိုးမခ အထောက်တော်မဵာိးိုံဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇ နိဒၝန်း မိုးမခကို သတင်းကို နေႚစဉ် မပိုႚိုံင်တဲ့အတကြ် သတင်းတြေ၊ ပၝးစပ်အတင်းတေကြို စုပေူးပီး...
>၂၀၀၇ ခိုံစြ်ိုံဝင်ဘာလ ၁၄ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ်
> ၂၀၀၇ ခိုံစြ်ိုံဝင်ဘာလ ၁၄ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ် မဵက်မြောက်ရေးရာ သတင်းမဵားပီနန်ဆရာတော်ဋ္ဌကီး ဦးပညာဝံသ၏ုသ၀ၝဒဒေၞအောင်ဆန်းစုကည် ၏ တြေႛဆုံဆြေးြေိံးရေး၏အကဵြိးကေဵးဇူးအေုကာင်းေူပာုကားခဵက်ကဗဵာဆရာ မောင်စမြ်းရည် ၏ ကဗဵာ...
>ဆရာတော် ဒေၝက်တာဦးကောဝိဒ ဟောုကားသော တရားတော်
> ဆရာတော် ဒေၝက်တာဦးကောဝိဒ ဟောုကားသော တရားတော်ိုံဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇ နားဆင်ရန် ရုပ်ပုံကြိုိံပ်ပၝ။ နစ်နေမန်း ဘလောက်ကို ကေဵးဇူးတင်ပၝတယ်။ No tags for this post. Related...
>သီတဂူဆရာတော်ုကီးကို တရားဟောခငြ့်မူပတြော့ ဟုသတင်းထကြ်
> သီတဂူဆရာတော်ကြီးကိုတရားဟောခြွင့်မပြုတော့ ဟုသတင်းထက်ြမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇ သီတဂူဆရာတော်ကြီးကိုတရားဟောခြွင့်မပြုတော့ဘူးလုႚိ့သတင်းရသည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်က မြင်းခြံတြွင် ”လူမိုက်တို့ႚသြွားရာလမ်း”ကို၎င်း၊ အောက်တိုဘာ ၂၁၊ စစ်ကိုင်းတြွင် ”နေနည်း၃ပါး” ကို၎င်း၊...
>ကနေဒၝိုံင်ငံကူမန်မာစစ်အစိုးရကို အရေးယူပိတ်ဆိုႚမြ တိုးမငြ့်
> ကနေဒၝိုံင်ငံကူမန်မာစစ်အစိုးရကို အရေးယူပိတ်ဆိုႚမြ တိုးမငြ့်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ိုံဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇ ကမ္တာတငြ် အူပင်းထန်ဆုံးဟု ဆိုရမည့် အရေးယူပိတ်ဆိုႚမကြို ခဵမတ်ြလိုက်ူခင်ူးဖစ်သည်ဟိုိုံင်ငူံခားရေးဝန်ုကီး က ထုတ်ဖော်ေူပာဆိုလိုက်သည်။...
>ဆားတောင်ဆရာတော် ဦးပညာဏိက ပဵံလန်ြတော်မူ
> ဆားတောင်ဆရာတော် ဦးပညာဏိက ပဵံလန်ြတော်မိူိုံဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇ ဘဒ္ဒ န္တ ပညာဏိက(ဆားတောင်ဆရာတော်)၊ သက်တော် (၈၃) နှစ်၊သိက္ခာတော် (၆၄) ၀ါ သည် ၁၃၆၉ ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၄...
>ကုလလုံခြံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးတငြ် တက်ရောက်နားထောင်သည့်ူမန်မာမဵား အာမေဋိတ်သံ ကဵယ်
> ကုလလုံခြံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးတင်ြတက်ရောက်နားထောင်သည့်ူမန်မာမဵား အာမေဋိတ်သံ ကဵယ်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ိုံဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇ ယနေႚ နယူးယောက် ကုလရုံးခဵပ်ြတငြ် ကဵင်းပသည့် ကုလလုံခြံရေးကောင်စီတငြ် အထူးကိုယ်စားလယြ် ဂန်ဘာရီ၏ အတြေႚအုကြံရငြ်းလင်းပြဲသိုႚူမန်မာ ၁၅၀...
>သီတဂူဆရာတော် ဦးဉာဏိသရ ဟောတော်မသြည့် လူမိုက် တရားတော်
> သီတဂူဆရာတော် ဦးဉာဏိသရ ဟောတော်မသြည့်လူမိုက် တရားတော်ိုံဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇– နားဆင်ရန် ရုပ်ပုံကြိုိံပ်ပၝ – (မ္တွဝေပေးသည့် နစ်နေမန်း ဘလောက်ကို ကေဵးဇူးတင်ပၝသည်) No tags for this...
>စစ်ဖိနပ်အောက်ကူမန်မာူပည်သားတြေ ဆင်းရဲတာလား၊ မြဲ နေတာလား
> စစ်ဖိနပ်အောက်ကူမန်မာူပည်သားတေသြူမဵာိးိုံင်ငိံငြ့် ယဉ်ြလ္တွင်ဆင်းရဲတာလား၊ မြဲ နေတာလားဦးအင်ဂဵင်နီယိာိုံဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇ူမန်မိာုိံင်ငိံငြ့် အူခာိးုိံင်ငံတိုႛတငြ် အနည်းဆုံး လုပ်ခရသူတစ်ဦးခဵင်းစီ၏ တစ်နေႛတာဝင်ငြေိံငြ့် စားဝတ်နေရေး ကုန်ကဵစာရိတ်ြိံင်းယဉ်ြဖော်ူပခဵက်ူမန်မိာုိံင်ငံဌာနေကိုယ်စားလယြ် ယူအန်ဒီိပီအဋ္ဌကီးအကဲ...
Page 997 of 1,002«1...995996997998999...1002»